Miyaan ka fogaanayaa? , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Qaar ayaa ciyaarta ka sameeya. Qaar baa ku sameeya si dhakhso ah ama cabsi darteed. Qaar waxay ku sameeyaan si ulakac ah, xumaan darteed. Inteena ugu badan ayaa sidaas sameeya marwalba, ka dib, waxaan u sameynaa markasta ama si aan kala sooc lahayn. Waxaan isku dayeynaa inaanan qabsan haddii aan sameyno wax aan og nahay inaysan sax aheyn.
Tani waxay si gaar ah u caddaataa markii gaari la wado. Ma awoodi doonaa inaan baxsado haddii aan gaadiidkan u gudbiyo dhinaca qaldan? Ma awoodi doonaa inaan baxsado haddii aanan si buuxda u joojin Joogsiga ama wali aan waditaanka Jaalaha la wadaago? Miyaan awoodi doonaa inaan ka baxsado xawaaraha haddii aan dhaafo xawaaraha - Waan deg degsanahay wax walba?
Mararka qaarkood waxaan isku dayaa inaanan qabsanin markaan kariyo ama aan tolo. Qofna ma ogaan doono haddii aan adeegsado uunsad kale ama haddii aan wax uun khaldamo. Ama waxaan isku dayaa inaan cuno gabal dheeri ah oo shukulaato ah oo aan la ilaalin, ama waxaan rajeynayaa in cudurdaarkeyga caajiska ah ee ah inuusan ku dhaqmin la ogaan doonin.
Miyaad waligeen isku daynaa inaan ka baxno waxyaalaha ruuxiga ah annagoo rajeynayna in Ilaah uusan indho indheeyn doonin ama iska indhatiri doonin? Sida iska cad Eebbe wax kasta wuu arkaa, sidaa darteed waxaan ognahay inaanan wax uun iskaga bixi karno sidaas oo kale. Nimcadiisu miyuusan wax walba daboolin?
Wali, wali waan isku dayeynaa. Waan ku doodi karnaa: Waan ka bixi karaa anigoo aan tukanin maanta. Ama: Waan ka fogaadaa anigoo dhahaya xantaan yar ama fiirinta websaydhkan caajiska ah. Laakiin dhab ahaan miyaan ula baxnaa waxyaalahaas?
Dhiigga Masiix wuxuu daboolayaa dembiyada Masiixi, wixii hore, kan hada, iyo mustaqbalkaba. Laakiin taasi micnaheedu ma ahan inaan sameyn karno wax kasta oo aan rabno? Qaar baa su’aashan waydiiyeen kadib markay ogaadeen in nimcadu ma ahan wax walba oo loo baahan yahay in la dhawro sharciga si ay u jiraan Ilaah hortiis.
Bawlos waxa uu ugu jawaabayaa maya codsi kujira Rooma 6,1: 2:
«Maxaan nidhaahnaa hada? Miyaynu ku sii soconnaa dembiga si ay u dhinto qiyaasta nimcadu? Taasi waa fogaan! » Nimco ma lihid shati lagu dembaabo. Qoraa warqad u ah Cibraaniyada ayaa na xusuusinaya: «wax walba waa la muujiyey oo la qariyey indhaha kuwa aan u sheegnay inaan kula xisaabtamo» (4,13). Haddii dembiyadeenna ay aad uga fog yihiin xusuusta Ilaah sida bariga xagga galbeed oo nimcadu ay wax walba daboosho, maxay tahay sababta aan wali annagu ugu xisaabtami karno? Jawaabta su’aashan waa wax aan xasuusto markaan marar badan maqashay Ambassador College: «habdhaqan».
"Intee in le'eg ayaan u oggolaan karaa oo aan uga bixi karaa?" Miyaanay ahayn dabeecad ka farxisa Ilaah. Ma ahayn dhaqankiisa markii uu sameeyay qorshihiisa badbaadinta aadanaha. Ma ahayn dabeecaddii Ciise markii uu iskutallaabta galay. Eebbe wuu siiyay oo wuu sii siinayaa - wax walba. Ma raadinayo jid-gooye, shuruudaha ugu yar ama waxa hadda ka gudbaya jidkiisa. Miyuu filayaa wax ka yar wixii inaga inaga dhiman?
Ilaah wuxuu inaga doonayaa inaan aragno dabeecad bixinno deeqsinimo badan, jecel, oo had iyo jeer na siisa, in ka badan waxa loo baahan yahay. Haddii aan nolosha u gudubno oo aan isku dayno inaan la baxno dhammaan noocyada waxyaabo maxaa yeelay nimcadu way dabooshaa wax walba, markaa waa inaan sharraxaad badan bixinnaa.